Akụkọ ụwa – Page 36 – hoo!haa!!
Akụkọ ụwa (Page 36)
Uyo: Ụgbọala akụgbuola mmọnwụ
Uyo: Ebelebe gburu ka a na-achọ ịgba ekeresimesi na mgbede Tọọzdee mgbe onye ọkwọ ụgbọala na-agba ọnwụ ọnwụ kụgburu mmọnwụ na-agara onwe ya n’ụzọ Nwaniba n’ebe Use Offot. Ya bụ mmọnwụ nke a na-akpọ “Ekpo” n’olu ndi Ibibio ka anyị nụrụ na ọ nwụnyụrụ anya ozigbo ozigbo n’ihi oke ọsọRead More →
Taa bụ Orie. A gbara m ụzọ gaa ORIE NOMEH ga zụta osikapa na mmanụ nri maka ekerismesi. Nomeh dị n’okpuru ọchịchị Nkanụ East. Ọ dibebere Nenwe nakwa Ụgbaawka. E nwekwara ọdụ Ụgbọ oloko n’ebe ahụ. Mmanụ nri na-adị egwu. A makwara ha ama maka ịkọpụta osikapaRead More →
Sọltan Sokoto abachiela ụlọakwụkwọ iwu nke Naịjiriya ntị maka ịmachi hijab
Sọltan Sokoto, Mohammad Sa’ad Abubakar abachiela ndi isi Ulọakwụkwọ iwu nke Naịjiriya (Nigerian Law School) ntị maka ịmachi ụmụ nwanyị ịsụ ịchafụ ndi alakụba a na-akpọ hijab. O kwuru na hijab bu usoro ekike ziri ezi maka ụmụ nwanyị ndi Alakụba. N’okwu ya ụbọchi Satode gara aga n’ọgbakọ ise nkeRead More →
Taa bụ ụbọchị ụka ma bụrụkwa ahịa EKE. Onye gara ahịa taa? Ngwanụ. Ọ kwa Puku Naịra Atọ ka a ga-erite n’asọmmpi ị ga-ahịa N3K!!!!!!!!! Read More →
Gọvanọ Taraba adọọla aka na ntị maka ndi na-achọ ịwakpo steeti ahụ
Jalingo: Gọvanọ Darius Ishaku nke Taraba Steeti nọrọ ụnyahụ were kwuo na-enwere otu na-achọ ịwakpo steeti ahụ. O kwuputara nke a mgbe ọ na-emeghe Mmemme Omenala Taraba na Jalingo Ka osinadị, Gọvanọ a akpọghị okwu ahasite na ịkpọ aha ndi a ọ sị na ha na-achọ ịwakpo steeti ya.Read More →
N’Ondo,Ndi Ukochukwu ejirila otumokpo dinaa umu nwanyi na-acho di aghara aghara
Akure: N’Akure, Ondo Steeti, Aka akparala ndi ukochukwu abuo maka iji were na-edina umu nwanyi ndi uka ha aghara aghara. Ndi nwuchikoro ha bu ndi oru nchekwa Nigerian Security and Civil Defence Corps, NSCDC. A choputara na ha na-eji ogwu were na-arata umu nwanyi ndia n’ulo uka ha. Ndi ukochukwuRead More →
By: ify orabasili
Tata bu nkwo, nkwo nike, nkwo-agu Udi,nkwo Eziagu wdgz. Ebe m no tata bu na nkwo ezeagu nke di n’Enugu steeti. A gara m ebe ahu I ga zuta abacha, ojoko, unere, akwukwo nri,mkpuru osisi dwgz. E si obodo di iche iche dika udi, oghe, Enugu ngwo, dwgz. abia ahiaRead More →
Ịkpọghachite onye uwe ojii gbagburu ụmụokorọbịa Ndigbo isii n’Apọ bụ arụrụala megidere madụ nile-Ọhaneze
Onyeisi Ọhaneze Ndigbo, Ichie Nnia Nwodo akọwaala mkpọghachi akpọghachiri onye uwe ojii ahụ gbagburu ụmụafọ Igbo madụ isii bụ ndi ahịa n’Abụja n’afọ 2005 dịka arụrụ ala megide madụ nile. ọ sịrị na ọ jọgburu onwe ya bụ etu Gọọọmentị Etiti siri kwado ịkpọghite ya bụ onye ogbu ọchụ ahụRead More →
AFỌ IGWE OGIDI
Taata bụ Afọ , ebe m ga- azu tata bu AFỌ-IGWE OGIDI nke di na okpuru ochichi Mgbago Ugwu Idemmili (Idemmili North) na Anambara Steeti. Ahia ahu bu nnukwu ahia. Otutu obodo di iche iche na azu ahia ahu dika Obosi, umunnachi, Abagana, Nnewi dwgz. N’ ihi na ahia ahuRead More →
Ahọpụtawo Ọkaikpe Ukwu Anambara Steeti dịka Onyeisi Otu Mbaụwa Ndi Ọkaikpe
– Chioma Ikeakọ Ahọpụtawo Ọkaikpe Ukwu nke Anambara Steeti, Ọkaikpe Pita Umeadị dịka Onyeisi Otu Mbaụwa Ndi Ọkaikpe n’ọgbakọ kwa afọ abụọ ndi otu a nke iri abụọ n’ise ya e mere n’obodo Karibii mmiri gazuru bụ Aruba. Site na nhọpụta a, Ọkaikpe ukwu ahụ abụrụla onye otu bọọdụRead More →
Ehee! Taata bu ahia eke, eke Awka, eke Ekwulobia, eke Abagana wdg. Bikonu, eke anyi ga-azu tata bu eke Abagana.Abagana di n’okpuru ochichi Njikoka na Anambra steeti. Otutu ndi mmadu si mpaghara di iche iche dika Awka, Amawbia, Enugwu-ukwu, Nimo, umunnachi,ifitedunu wdgz abia ahia. Enwe kwara odu di iche icheRead More →
Ndi Fulani na-achị ehi awakpola ndi Adamawa
In: Nke na-eme ugbua!
Ndi Fulani na-achi ehi ka anyị na anụ ugbua na ha wakporo obodo nta dịgasị na Lawaru nakwa Dong dị n’Okpuru Ọchịchị Demsa nke Adamawa Steeti. Site n’ozi e nwetara n’aka Onyeisioche Okpuru ọchịchị Numan, ndi mwakpo a na-esu obodo nta ndi ahụ ọkụ N’abalị ole mole gara aga, aRead More →
NKWỌ Taa bụ Ahịa Nkwọ; Nkwọ Ogbede, Otu Nkwọ Ọnịcha, Nkwọ Nnewi, Nkwọ Owelli, w.d.g. Onye ga-agara anyị ahịa Nkwọ taa? O ruo nu n’omume. Chetakwa na uru dịkwa yaoooo! Uru Puku Naịra Atọ. N3KRead More →
By: mba udogu
AFỌ ỤGBỌỌKA bụ ahịa dị n’Ugbọọka nke dị n’Okpuru Ọchịchị Nkanu East n’ime Enugwu Steeti. Ihe akacha enweta n’ahịa ahụ bụ osikapa nke ndi obodo ahụ na-akọpụta nke ukwuu. Ihe ndi ọzọ na -adị nke ukwuu bụkwa ihe ndi a na-akọpụta n’ugbo dịka akpụ, ji, ede nakwa ọna. Obodo ndiRead More →
“Tụfịakwa! I yighi nna gị, chaa chaa!”-Ọbianọ na-akọ Emeka Ojukwu, nta
Aka na-achị Anambara Steeti, Wili Obianọ, akọwaala Emeka Ojukwu, nta dịka onye na eyighi nna ya bụ Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu chaa chaa. O kwuru nkea mgbe ọ na-akọwa naRead More →
Taa bu ORIE. Anyi gara ahia ORIE NWICHEKU di na Okohia, Isiekenesi nke no n’Okpuru Ochichi Ndida Ideato (Ideato South). Ahia ahu na mgbede ubochi orie nile. Ndi na-abia ahia ahu na-esi obodo di iche iche n’ime Isiekenesi. Ihe di mkpa a na-enwetakwa n’ahia ahu bu mmanya ngwo. Ndi obodoRead More →
ỌGỤ ARỌ ỌNWA DISEMBA AFỌ 2017
Kwuo eziokwu maka ụmụagbọghọ Chibọk- Jonatan na-agwa Shetima
Site n’aka Mba Udogu Shetima na Jonatan Onye bubu Onyeisiala, Gudlọk Jonatan nọrọ ụnyahụ cheere Aka na-achị Boronu Steeti bụ Kashim Shetima aka mgba ka ọ gwa ụwa eziokwu banyere etu aka ya si dị na ntọrọ atọrọ ụmụ agbọghọ Chibok . N’ozi sitere n’aka onye na-ekwuchitere ya, Ikechukwu Eze,Read More →
Maina: Mịnịstrị na-ahụ maka okwu ala anyị enwetaghị ikike n’aka m – Oyo-Ita
Onyeisi ndi ọrụ bekee ala anyị, Winifred Oyo-Ita, ekwuola na Mịnịstrị na ahụ maka ala anyị enwetaghị ikike n’aka ya tupu ha akpọghachi Abdulrasheed Maina, onue bubu onyeisi oche otu aka ọkụ onyeisiala hiwere maka ịghazigharị okwu banyere ụgwọ ezumike nka ( Presidential Task Force on Pension Reform). Maina, onyeRead More →
Taa bụ Afọ, ahịa anyị ga-aga taa bụ AVỌ-EMUDO. Ahịa Avọ (Afọ) Emudo dị n’Emudo-Nenwe nke dị n’Okpuru Ọchịchị Anịnri nke Enugwu Steeti. Ihe e jiri mara ahịa Avọ-Emudo bụ anụ jaki. A na-esi Steeti dịgasị n’Ugwu Awụsa dịka Kebbi nakwa Katsịna ebute ya bụ anụma n’Avọ-Emudo ebe aRead More →
Anonymous on KA A NAPỤ EEDC ỌRỤ – ỤLỌ NZUKỌ OMEBEIWU ENUGWU STEETI
Ngozi on KA A NAPỤ EEDC ỌRỤ – ỤLỌ NZUKỌ OMEBEIWU ENUGWU STEETI
Odoziaku Florence Ofor on UGOEZUE PAT AGỤBỤZỤ MERE MMEMME NCHETA ỌMỤMỤ IRI AFỌ ASAA YA TAA
Nwadike on ENUGWU: AKA AKPARALA NDỊ NTỌ NDỊ FULANI NA-AKPA IKE
Williejeala on ỌKỤKỌ
“ADEBOYE ABỤGHỊ EZIGBO ỤKỌCHUKWU, MAKA ỊGWA ỤMỤ NWOKE HA ANỤLA NWANYỊ AMAGHỊ ESI NRI” – ADA ỌNỤ
CHAỊ! ỤMỤ NWANYỊ ISE EJIRILA IKO KWAGBUO DI HA N’IKE
AMOTEKUN: EKITI STEETI GA ATỤGHARỊ IWU AMOTEKUN N’OLU YOROBA